को हुन् यि पारसका फ्यान ? जसले खेल मैदानभित्रै छिरेर पारसको खुट्टा ढोगे, खेल अधिकारीकारीहरुले जवरजस्ती बाहिर निकाल्नुपर्यो (भिडियो हेर्नुस्) – " कञ्चनजंगा News "
को हुन् यि पारसका फ्यान ? जसले खेल मैदानभित्रै छिरेर पारसको खुट्टा ढोगे, खेल अधिकारीकारीहरुले जवरजस्ती बाहिर निकाल्नुपर्यो (भिडियो हेर्नुस्)
No Comments on को हुन् यि पारसका फ्यान ? जसले खेल मैदानभित्रै छिरेर पारसको खुट्टा ढोगे, खेल अधिकारीकारीहरुले जवरजस्ती बाहिर निकाल्नुपर्यो (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौं, १२ पुष । दोस्रो संस्करणको पोखरा प्रिमियर लिग क्रिकेट (पीपीएल) को उपाधि चितवन राइनोजले जितेको घोषणा हुन नपाउँदै पोखरा स्थित क्रिकेट मैदानमा दुई जना पारस खड्काका फ्यान मैदानमा छिरे । पूर्व क्याप्टन पारसको नेपालीराष्ट्रिय क्रिकेट टिमको जर्सि नम्मर ७७ लगाएका दुई जना उनको फ्यान दगुरेर मैदानमा प्रवेश गर्छन ।
तल देखाइएको भिडियोमा तीन घण्टा ४० मिनेट पछिको भिडियोमा देख्न सकिन्छ । एक जना फ्यान पारसको खुट्टा ढोग्न पुग्छन् । खेल सकिएपछि आफ्नै टिमसंग खुसी मनाउँदै गरेका पारसको खुट्टामा जब आफ्ना फ्यानले ढोग्न पुग्छन् पारस झस्कन्छन् । उनले समातेर फ्यानलाई अंगालो हाल्छन् । त्यस लगत्तै अर्का फ्यान पनि पारसलाई अंगाल्न पुग्छन् । त्यतीञ्जेल टाढा रहेका खेल अधिकारीले पनि त्यो दृष्य देख्छन् अनि दौडिएर मैदानमा छिरेर ति दुई पारसका फ्यानलाई बाहिर निकाल्छन् ।
शनिवार पोखरा क्रिकेट मैदानमा आज (शनिबार) भएको फाइनल खेलमा विराटनगर टाइटन्सलाई ३२ रनले पराजित गर्दै चितवनले उपाधि जितेको हो । २ सय ३ रनको फराकिलो लक्ष्य पछ्याएको विराटनगर निर्धारित २० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर १ सय ७० रन मात्र बनाउन सक्यो । मोहमद जैद आलमले ५७ रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले । ४८ बलमा ५ चौका र ३ छक्का प्रहार गरे पहि टिमलाई जित दिलाउन भने सकेनन् । यस्तै कप्तान प्रदिप सिंह ऐरीले ३६ , पुनित मेहेराले ३२ र नोमान खानले १८ रन बनाए । चितवनका करन केसीले ३ तथा सन्नी पटेलले २ विकेट लिए । यस्तै रोहण मुस्तफाले समान १ विकेट हात पारे ।
यसअघि पोखरा रंगशालामा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको चितवनले निर्धारित २० ओभरमा ५ विकेट गुमाएर २ सय २ रन बनाएको थियो । चितवनको फराकिलो स्कोरमा अनिल कुमार शाह र रोहन मुस्तफाले अर्धशतकिय इनिङ्स खेले । दुवै ब्याट्सम्यानले समान ५०र५० रन बनाए । यस्तै कप्तान पारस खड्काले २५, आरिफ शेखले १९, सन्नी पटेलले १६ र करण केसीले २६ रनको योगदान गरे । विराटनगरका पुनित मेहेराले र जैद आलमले समान २र२ विकेट लिए । किशोर महतोले १ विकेट लिए । चितवन दोस्रो संस्करणमा अपराजित रहँदै उपाधि जित्न सफल भएको हो ।
गत संस्करणमा भने चितवन घरेलु टोली पोखरा पल्टनसंग पराजित भएको थियो । पीपीएल उपाधिसंगै पारसले नेपालमा हुने तीनवटै फ्रेन्चाइज क्रिकेटको उपाधी जित्न सफल भएका छन् । यसअघि उनको कप्तानीमा रहेको टिमले एभरेष्ट प्रिमियर लिग र धनगढी प्रिमियर लिगको उपाधि उचालेका थिए ।
चितवन अपराजित रहँदै फाइनल प्रवेश गरेको थियो भने विराटनगरले बुटवल ब्लास्टर्सलाई पराजित गर्दै फाइनलमा स्थान बनाएको थियो। यसअघि पीपीएलको पहिलो संस्करणको उपाधि घरेलु टोली पोखरा पल्टनले चितवनलाई नै पराजित गर्दै जितेको थियो। यसपटक भने पोखरा लिग चरणबाटै बाहिरिएको थियो।
← पानि बेच्ने पाँडेले हसाएरै लडाएपछी,नक्कली पाँडेको मनै छुने यस्तो छ कहाँनि ( हेर्नुहोस भिडियो ) → मनकामना माईले सबैको रक्षा गरुन मनकामना मन्दिरलाई एक सेयर गर्दै भेटी चढाएर भोलि आइतबारको राशिफल पढ्नुहोस्